‘लभ लभ लभ’ कसरी जन्मियो : दीपेन्द्र खनाल उवाच
By Bisnu Sharma on	 11th April 2017 समाचार, सेलिब्रिटी
भनिन्छ : शब्दभन्दा कामको आवाज चर्को सुनिन्छ । यो उक्ति दीपेन्द्र के. खनालमा लागु हुन्छ । समकालिन नेपाली सिनेमाका यी ठिटा निर्देशकका काम चर्का लाग्छन्, बोलीभन्दा ।
उनले के मात्र गरेनन् ? थ्रीडी भित्राए । पशुपति प्रसादजस्ता यथार्थ पात्र उठाए । कुनैबेला देशले फलो गर्ने राजेश हमालको ब्रान्डेड कपाल कटाए र पात्रमा ढाले । चपली हाइटबाट उच्च मध्यम वर्गसामु नेपाली फिल्म जोडे । अब पालो लभ लभ लभको ।
बैशाख १ गते रिलिज हुने लभस्टोरी ड्रामामा हाइप्रोफाइल अभिनेता छैनन् न त मूलधारले परिभाषित गर्नेजस्तो मनोरन्जन मसला । दुई नयाँ अभिनयकर्तालाई लिएर उनले प्रेमकथा बुनेका छन् । उनलाई लाग्छ, यो अल्टिमेट लभस्टोरी हो, नेपाली भुइँमान्छेको ।
कसरी जन्मियो लभ लभ लभ ? ‘कथाको जन्मै इमोसनबाट भएको हो । मसँग आफ्नै इमोसन छ । यो मेरो पहिलो लभस्टोरी पनि हो । चलिराखेको हिरोइज्म छैन । आफ्नै भोगाइ र देखाइमा कथा बुनेको छु’ हात्तिसारको सोसाइटी क्याफेमा दीपेन्द्र सुनिए ।
दीपेन्द्रलाई थाहा छ, कथाको जन्म या त भोगाइ, या त पढाइबाट हुन्छ । र, त उनी जानरामा खेल्न रुचाउँछन् र कथा शैलीमा विविधता घोल्छन् । काठमाडौंको उच्च वर्गदेखि सिन्धुपाल्चोकको भुइँमान्छेसँग जोडिन सक्ने क्षमता छ उनमा ।
‘यसभित्र फिक्सन कम र ननफिक्सन ज्यादा छ । घटनालाई लुकेर खिचिरहेको ढंगले कथा भनेको छु । एक्टरले स्वभाविकरुपमा क्षमता उतारेका छन् । कसरी त्यो उमेर समूहका तन्नेरी खान्छन्, हिँड्छन्, बोल्छन् भन्ने टिपेको छु । चोरेर भनिने साहित्य संवाद यसमा छैनन’ दीपेन्द्र कथन छ, ‘मैले लभ गर्दा मोबाइल फोन थिएन । त्यतिबेलाको इमोसन मलाई सत्य लाग्छ । अहिले फास्टफुड भयो । स्क्रिप्ट लेख्दा यो यथार्थलाई बुझ्ने काम भएको छ ।’
३५ वर्षजतिका दीपेन्द्रले कसरी किशोरवयको प्रेम लेखे ? अनि दृश्यभाषामा भने ? यी कुरा उतार्न उनले धेरैपटक प्लस टु कलेजको फन्को मारेका छन् । लुकेर धेरैपटक ठिटाठिटीको गफ सुनेका छन् । धेरैपटक रेष्टुराँ धाएका छन् र महसुस गरेका छन् । ‘हो, त्यो इमोसनलाई देखाउन सजिलो अवश्य थिएन’ भन्छन्, ‘मलाई लाग्यो, संसारको सबै इमोसन एउटै हो । मात्र अभिव्यक्त गर्ने तरिका फरक हो ।’
उनलाई लाग्छ, उनका पात्रहरुले साना कुरामा इमोसन व्यक्त गर्दैछन् । लभ लभ लभमा उनले साना कुरामा कथा बुनेको बताउँछन् ।
कहिल्यै बजार फलो गरेनन् उनले । बजार नपछ्याउनेसँग खतरा पनि हुन्छ र सम्भावनाका अनन्त ढोका पनि । ‘हो, मार्केटमा जे बन्या छ, मलाई त्यसलाई फलो गर्दिन’ भन्छन्, ‘आफू खम्बा भएर, रिस्क लिएरै फिल्म बनाएको छु ।’ मार्केटको पछि लाग्दा जोखिम कम हुन्छ भन्ने उनलाई थाहा छ । ‘मलाई जोखिमभित्र अवसर खोज्न मन लाग्छ’ उनी भन्छन् ।
बजारले व्यवसायिक आशा बढी जगाउने जोखिम उनले देखेका छन् जहाँ सिर्जनात्मक क्षमता ह्रास हुन्छ । हुनसक्छ, दीपेन्द्रले लभ लभ लभ इमान्दारसँग बनाएका हुन् ।
सुरज पाण्डे र स्वस्तिमा खड्का अभिनित फिल्म नयाँवर्षको पहिलो दिन रिलिज हुँदैछ । दीपेन्द्रको टोपीमा कस्तो प्वाँख थपिने हो, बजारभन्दा उनको कथा भन्ने शैलीले पक्कै निक्र्यौल गर्नेछ ।